Tag: Ọ | Martech Zone
I Nọgidere Na-eji Okwu ahụ “Eke Ihe”…
Satọdee, Nọvemba 7, 2020 Sunday, Jenụwarị 24, 2021 Douglas Karr
Robert Half Technology na The Creative Group bipụtara ọmụmụ na infographic, Digital Marketing Dissonance, ebe 4 na 10 CIOs na-ekwu na ụlọ ọrụ ha enweghị nkwado dị mkpa maka ọrụ ahịa dijitalụ. N’agbanyeghi na enweghị m obi abụọ na nke ahụ bụ eziokwu, ọmụmụ ihe ahụ mebiri ụfọdụ data n’ime bọket abụọ, ndị isi IT na ndị isi okike. Amaghị m na m kwenyere na enwere ụdị mmekọrịta dị n'etiti ịbụ onye IT ma ọ bụ ịbụ onye okike.
Kedu ihe egwu dị na Towerlọ Elu nke Tek?
Sọnde, Septemba 23, 2018 Sọnde, Septemba 23, 2018 Lindsay Tjepkema
Kedu ihe ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na ụlọ elu gị nke ọgbara ọhụrụ na-ada n'ala? Ọ bụ echiche dakwasịrị m na Satọde ole na ole gara aga ka ụmụ m na-egwu Jenga ka m na-arụ ọrụ na ngosi ọhụụ banyere ihe kpatara ndị ahịa ga-eji chegharịa na teknụzụ ha. Ọ kụrụ m na teknụzụ ngwongwo na ụlọ elu Jenga nwere ọtụtụ ihe. N'ezie, a na-akpọ Jenga site na ịkọba ihe mgbochi osisi ruo mgbe dum
Kedu ndị na-ere ahịa nwere ike ịmụta na nchọpụta ngbanwe nke IT nke Dell?
Tọzdee, Eprel 27, 2017 Friday, April 28, 2017 Douglas Karr
Dell na-akọwa Mgbanwe Teknụzụ Ozi dịka usoro nke ịkwalite ozi na teknụzụ nkwukọrịta iji mee ka ndụ mmadụ rụọ ọrụ nke ọma ma ka mma. Mgbanwe IT na-etinyere na akụrụngwa iji meziwanye arụmọrụ na sistemụ n'ihi ibelata ịla n'iyi nke akụ. Mụ na Mark Schaefer na onye ahịa ya, Dell Technologies na-arụ ọrụ, n'ime ọnwa ole na ole gara aga iji bipụta pọdkastị na-enye nghọta banyere ndị na-anya mgbanwe IT
Fraịde, Septemba 26, 2014 Fraịde, Septemba 26, 2014 Scott Vaughan
Ugbu a na ọdịnihu nke Teknụzụ Ahịa ka arụrịta ụka ma weghaara ya na Conference Martech Conference na Boston. Ọ bụ ihe omume rere ere nke mere ka ndị ndu echiche dị iche iche gbakọta na ụwa Martech. N'oge gara aga, enwere m ohere ijikọ na oche ọgbakọ, Scott Brinker, iji kpaa maka mbido ụlọ ọrụ na otu ọrụ Chief Marketing Technologist siri bụrụ ọrụ ga -enwe n'ime ụlọ ọrụ azụmaahịa gburugburu ụwa. Na mkparịta ụka anyị, Scott
Nnukwu data. Amachaghị m gị, mana ọtụtụ ndị ahịa anyị na-eri mmiri na ya. Ọ bụ ezie na ikpo data na-aga n'ihu, anyị na-achọpụta na ọtụtụ ndị ahịa anyị anaghị ejikwa ụfọdụ usoro azụmaahịa dị mkpa iji nweta, jigide ma melite uru ndị ahịa. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ha na-agba mgba nke nnukwu njikọ dị n'etiti IT na ahịa. Naanị ụnyaahụ, m ga-agwa otu n'ime ndị ahịa anyị 'IT team to
10 Social Media Omume maka B2B Marketing
N'August, Softchoice zigara ndị ahịa ha nyocha ma nata nzaghachi 1,444 na-anọchite anya ihe karịrị 1,200 obere na azụmaahịa (SMB), ụlọ ọrụ, ngalaba ọha na ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ. 71% nke ndị zaghachiri nọ na IT na ihe nlele ahụ bụ isi 50 pasent US na 50 pasent ndị otu Canada - yabụ onye nnọchi anya mpaghara azụmahịa North America. Otu akụkụ nke ngosi nke kwesịrị iti mkpu bụ Okwu nnọchianya nke okwu: Dị mkpa
Nkà na ụzụ ọ na-akwado ma ọ bụ gbanyụọ ahịa gị?
N'ịbụ ndị rụworo ọrụ na Software dị ka Ọrụ n'ime afọ iri gara aga, ọtụtụ ewu ewu ya sitere na ụlọ ọrụ anaghị arụ ọrụ site na ngalaba IT ya. "Ọ bụrụhaala na ị gaghị agwa ndị IT anyị okwu!", Bụ mantra m na-anụ mgbe mgbe, "Ha na-arụsi ọrụ ike!". A na-arịọ arịrịọ ọ bụla site na usoro dị n'ime ma mechara zute 482 ihe kpatara na enweghị ike ịme ya. N'ụzọ na-emegide onwe ya, ndị a bụ otu ụmụ okorobịa ahụ n'ezie